Khiyaanada Ghostwriter I Iska jir khayaanada qoraaga ghostwriter ee shabakada waraaqaha
DIGNIIN: khayaanada qoritaanka!
Boggan waxaan ku taxnaa dhammaan bogagga cusub ee bogagga cusub ee khiyaanooyinka ghostwriting ee aan ognahay.
Waxaan ku taxnaa dhammaan boggaga internetka ee been abuurka ah ee naloo yaqaan ee ku shaqeeya qormooyinka tacliinta sare ee boggan.
Iska jir khayaanada dadka! Waxaan hadda ka helaynaa macluumaad macaamiisheenna ku saabsan bogagga cusub ee booris-qorayaasha oo adeegsada khiyaanooyin sharci-darro ah si ay ugu tahriibaan jidka sare ee mashiinka raadinta Google. Waxaad adeegsaneysaa farsamooyin su'aal gal ah si aad ugu soo jiidatid isticmaaleyaasha ugu badan ee suurtogalka ah websaydhka. Sidoo kale ma aha wax aan caadi ahayn in bogagga internetka ee khiyaanada leh ay adeegsadaan istiraatiijiyad xayeysiis ah oo lacag la bixiyo (tusaale ahaan Google Adwords) oo markaa ay soo jiidato dad badan oo aan shaki ku jirin bartaada. Ugu dambeyntiina, macluumaadkaaga shakhsiyeed, sida macluumaadka bangiyada, ayaa halis ku jira markaad isticmaaleyso bogagga internetka ee aan ammaanka ahayn. Maaddaama taxaddarka ugu weyn looga baahan yahay halkan, waxaannu kugu soo qoreynaa goobaha been-abuurka ah ee xilligan la og yahay adiga.
Websaydhada khiyaanada lagu yaqaan ee naloo yaqaan:
qoraaga ugu fiican.at
qorayaasha aad u wanaagsan.de
DIGNIIN: Fadlan ha dalban adeeg bogagga kor ku xusan, maadaama tan weligeed la fulin doonin oo dabcan lacagtana laguuma soo celin doono.
Sideen ku aqoonsan karaa bixiye magac qoraa caan ah?
1. Ha u isticmaalin websaydhada hawlwadeen aan lagaranayn
Hawl wadeenada ama milkiileyaasha websaydhka waa in lagu xuso magac ahaan sawirka (eeg: https://papernerds.de/Impressum/)
2. SSL encryption iyo bixinta aaminka ah
Ka raadi calaamadda qufulka bidix ee kore ee biraawsarka internetka. Websaydhada leh astaantan ayaa u gudbiya macluumaadka lacag bixinta qaab sir ah, markaa xogtaadu way ka nabadgashaa in lagu basaaso.
Si deg deg ah shaqo ma ugu baahan tahay? Guji dalabka hadda oo bilow isla markiiba!